Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy ao amin’ny bilaogy Toniziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2018 17:56 GMT
Mankalaza ny Androm-pireneny ho an'ny vehivavy i Tonizia amin'ny 13 Aogositra. Naparitaka tao amin'ny tontolon'ny bilaogy ny antso hanatevenana laharana ny vehivavy manerantany amin'ny fankalazana ary hanamarihana ny andro miaraka amin'izao tontolo izao amin'ny 8 Martsa.
Ny 13 Aogositra no manamarika ny andron'ny Fehezan-dalàna ho an'ny Sata Manokana izay nankatoavin'ny ny filoha teo aloha Habib Bourguiba tamin'ny taona 1956 – lalàna lehibe izay nanafoana ny fampirafesana, nametraka ny fisaraham-panambadiana ara-dalàna ary nametraka ny fe-taona fanambadiana ho 17 taona raha kely indrindra ho an'ny vehivavy. Mba hahitana izany, heverinay fa manana tombony manokana ny vehivavy Toniziana ary mizaka tsara ny zo sy ny fahalalahan'izy ireo. Na izany aza dia, hafa ny fiainana andavanandro. Niresaka momba ity zava-misy ity tamin'ny Andro Manerantany ho an'ny Vehivavy ireo bilaogera sasany.
Bilaogera Abu Nadhem nanolo-kevitra ny hampiarahana ny roa andro ho andro iray ary hampiditra ny hetsiky ny vehivavy any Tonizia amin'ny an'ny iraisam-pirenena. Eny tokoa, hoy izy tao amin'ny bilaogy Ya tounes :
Androany, amin'ny taonjato faha-21, heverina ho toy ny firenena Arabo loha-laharana amin'ny fankatoavana ny zon'ny vehivavy amin'ny alàlan'ny Fehezan-dalàna momba ny Sata Manokana i Tonizia. Nisafidy ny 13 Aogositra ho androm-pirenena ho an'ny vehivavy ny filoha teo aloha Bourguiba, na dia izany aza, tsy fantatsika ny antony tsy firaharahiana ny 8 martsa, andro iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy ??? Rahoviana isika vao hanaiky ny 8 martsa ho androm-pirenena sy iraisam-pirenena mba ho ao anatin'ny hetsiky ny vehivavy manerantany ny vehivavy Toniziana ??????
Satria nifanindry tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny Mpaminany Mohammed, fankalazana malaza ao amin'ny alimanaka Toniziana ny andro manerantany ho an'ny vehivavy tamin'ity taona ity, nampifandray fotoana roa tao amin'ny lahatsoratr'izy ireo ny bilaogera sasany. Neji khachnaoui, ohatra, nanoratra toy izao:
Andeha hiarahaba antsika amin'izao fotoana izao fa nambara ho renivohitra Islamika fa tsy renivohitra ho an'ny kolontsaina Islamika i Kairouan .
Aoka isika ho faly amin'ny Sheikh [mpitondra fivavahana] nambara tamin'ny taona 2009 fa ny lehilahy dia afaka misaraka ny vadiny amin'ny filazana fotsiny hoe: “Sarahako ianao.”
Aoka isika ho faly amin'ny Fehezan-dalàna momba ny Sata Manokana izay miharava hatrany, isan'andro isan'andro.
Aoka isika ho faly amin'ny firenena izay antsasaky ny lehilahy ny mponina, ary lehilahy ihany koa ny antsasany ambiny.
Aoka isika ho faly amin'ny vehivavy mankalaza ny andro fahalalahany amin'ny alàlan'ny fanomanana ny Assida [Toniziana mankalaza ny tsingerin-taona nahaterahan'ny Mpaminany amin'ny alalan'ny fahandroana Assida zgougou, sakafo malaza eo an-toerana].
Aoka isika ho faly amin'ny [be fanadinoana] izay hampiasaintsika hametrahana ny repoblikan'ny rahampitso.
Araka ny mahazatra, nisafidy sariitatra ilay bilaogera Adihevitra Toniziana http://debatunisie.canalblog.com/ mba haneho ny heviny ary nampifandray ity fankalazana ity tamin'ny Ammar 404, mariky ny sivana ao Tonizia sy ny tsingerin-taona nahaterahan'ny mpaminany, ity ny sary:
Ammar tonga nanandrana ny Assida
Ny tena manaitra dia lehilahy avokoa ny ankamaroan'ireo bilaogera nibilaogy momba ny andron'ny vehivavy, izay vehivavy roa monja no nibilaogy momba ity fankalazana ity. l’As Number One nanoratra tamin'ny fitenim-paritra Toniziana ary nilaza hoe:
Taitra noho ny fifanoherana lehibe eo amin'ny fisainan'ny olona teraka teo amin'ny taona efapolo sy dimam-polo izay niaraka tamiko aho. Ny vondrona voalohany (efa-polo taona) dia mahita ny asa sy ny fampianarana ny vehivavy ho singa tena ilaina mba hiantohana ny fahamendrehan'ny vehivavy. Saingy te hilaza aho fa tsy mahafantatra ny lanjan'ny Fehezan-dalàna ho an'ny Sata Manokana ny ankamaroan'ny tanora (vehivavy sy ny lehilahy). Miampanga izany ny sasany amin'izy ireo ary mangataka amintsika mba hiverin-dalana (fahendrena ny miverina amin'ny fiaviana). Ny tena maha-zendana dia avy amin'ny tovovavy nahita-fianarana ny antso tahaka izany, izay ny hanambady lehilahy manankarena sy hijanona ao an-tokantrano no tena fikasana lehibe eo amin'izy ireo. Raha mandany vola ho azy (vadiny) ny lehilahy.